အမှတ်တရ အိုဘားမား | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aung San/Aung San Suu Kyi » အမှတ်တရ အိုဘားမား
Posted by thit min on Nov 20, 2012 in Aung San/Aung San Suu Kyi, News, Politics, Issues | 25 comments
ဘလော့ဂ်၊ဝက်ဆိုဒ် ပိုင်ရှင်များနှင့်တကွ သက်ဆိုင်ရာဓာတ်ပုံများ၏မူလ ပိုင်ရှင်များအားအထူး ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း။
ဖုတ်ပူမီးတိုက် ရန်ကုန် (ကာတွန်း – ဝလုံး)
တယောက်ထဲလားမေးတော့ ဒီမှာတအုပ်ကြီးပါ ((အမေစုခြံထဲကလုံခြုံရေး))
အမေ့ခြံထဲမှာ ရာသီအလိုက် ဖူးပွင့်တဲ့
Credit to Yeyint nge ဓါတ်ပုံ-ဆန်နီ
““အော်… အော်.. ကျယ်ကျယ်အော်… နိုင်ငံတော်သီချင်းဆိုသလို ကျယ်ကျယ်အော်”” တဲ့။
အမေရိကန်သမ္မတကြီး ကျန်းမာပါစေဆိုတဲ့ ကြွေးကြော်သံတွေကို လိုက်အော်ခိုင်းနေတဲ့
ရန်ကုန်အစိုးရ လူမှုရေးဝန်ကြီးကိုကျောင်းသူလေးတစ်ယောက်က ခပ်တိုးတိုးလေး ဘာပြန်ပြောတယ်မှတ်တုန်း။ ““ဦးလေးကြီးတို့ အော်ပါလား”” တဲ့။ အနားက ရဲတွေ တခွိခွိဖြစ်ကုန်ရဲ့။ း)
အမေရိကန်သမ္မတ ဘားရက်အိုဘားမားနှင့် သူ၏ ဇနီး မီရှယ် ရိုဘင်ဆင် အိုဘားမားတို့၏ ပညာရေးခရီး အကြောင်း
ဘားရက် အိုဘားမားသည် ငယ်စဉ်တောင်ကျေး ကလေးဘဝက အခြားကလေးများကဲ့သို့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် နေခဲ့ရသည်။ သူ ၂ နှစ် အရွယ်တွင် အမေရိကန်နိုင်ငံ ကင်ဆက်ပြည်နယ် မွေးမိခင် စတင်လီ အန်းဒန်ဟမ် Stanley Ann Dunham နှင့် အာဖရိကတိုက် ကင်ညာနိုင်ငံဖွား ဖခင် ဘားရက်အိုဘားမားစီနီယာ Barack Obama Sr. တို့သည် ကွာရှင်းပြတ်စဲ ခဲ့ကြသည်။
…ဘားရက် အသက် ၆ နှစ် အရွယ်တွင် သူ၏ မိခင်သည် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသား တစ်ဦးနှင့် လက်ထပ်ခဲ့ပြန်သည်။ ဘားရက်တို့ မိသားစုသည် အမေရိကန်မှ အင်ဒိုနီးရှားသို့ ပြောင်း ရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ မိခင်သည် ဂျာကာတာမြို့ရှိ အမေရိကန်သံရုံးတွင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာ သင်ကြားပေးခဲ့သည်။ မိခင်သည် သူမ၏ သားကလေး ဘားရက်ကို အာဖရိကတိုက်သား ဖခင်၏ အစဉ်အလာ ရိုးရာကို ဂုဏ်ယူရန်နှင့် ပထွေး၏ အင်ဒိုနီးရှား ယဉ်ကျေးမှုကိုပါ လေးစား ထိန်းသိမ်းရန် သင်ပေးခဲ့ သည်။ ထို့ပြင် ဟာဝိုင်ရီတွင် နေထိုင်ကြသော မိခင်ဘက်မှ အဘိုးအဘွားတို့၏ ဇာတိနယ်မြေ ကင်ဆက် ပြည်နယ်ကိုလည်း အစဉ် သတိရရန် မှာကြားခဲ့သည်။ မွေးရပ်မြေ အမေရိကန်နှင့် အစဉ်အမြဲ အဆက်အသွယ် ရှိစေရန် ဘာရက်ကို သူ၏ မိခင်သည် နေ့စဉ်နံနက် ၄ နာရီတွင် ထစေပြီး အဝေးသင် သင်တန်းများမှ အင်္ဂလိပ်စာနှင့် အခြား ဘာသာရပ်များကို သင်ကြားပေးခဲ့သည်။
ဘားရက်သည် စတုတ္ထတန်းတွင် အစိုးရကျောင်းသို့ ပြောင်းရွှေ့ တက်ရောက်ခဲ့သည်။ သူ အသက် ၉ နှစ် အရွယ် သို့ ရောက်ရှိသောအခါ အသားအရောင် ခွဲခြားရေး မဂ္ဂဇင်းတစ်ခုမှ အဖြစ်အပျက် ပုံပြင်ကို ဖတ်ရှုမိရာ စိတ်ထိခိုက်ခြင်းကို ခံစားရသလို သူ၏ စိတ်တွင် ရှုပ်ထွေးမှု ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ဘားရက်သည် ယခုကဲ့သို့ ရေးသားခဲ့သည်။ “ယင်းဆောင်းပါးကို ဖတ်ရှုအပြီး ကျွန်တော်သည် ချုံခို တိုက်ခိုက်ခြင်းကို ခံလိုက်ရသလို စိတ်ဓာတ် ကြမ်းတမ်း ခဲ့ရသည်။” ထိုအချိန်က သူသည် နှုတ်မှ ဘာမှမပြောခဲ့သော်လည်း ယင်းဆောင်းပါးနှင့် တကွ နောက်ဆက်တွဲ စဉ်းစားမိသောမေးခွန်း တို့သည် သူ့အတွက် ဘယ်တော့မှ မေ့မရ နိုင်တော့ပေ။
ဘားရက် ပဉ္စမတန်း ရောက်ရှိသောအခါ သူ၏ မိခင်၏ ဒုတိယ အိမ်ထောင်သည် ပြိုကွဲပြန်သည်။ သူမ၏ ဒုတိယ အိမ်ထောင်နှင့် ပါရဂူဘွဲ့တို့ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွင် ပြီးဆုံးချိန်တွင် ဘားရက်ကို ဟာဝိုင်ရီရှိ အဘိုး အဘွားများထံသို့ ပို့ခဲ့ရသည်။ အဘိုးအဘွားများသည် ဘားရက်ကို အကောင်းဆုံး ပုဂ္ဂလိကကျောင်းတွင် ထားပေးခဲ့သည်။ အတန်းသူ အတန်းသားများသည် မူကြိုတန်း မှစပြီး အတူကျောင်းနေဘက်၊ ချမ်းသာ သော မိဘများ၏ သားသမီးများ ဖြစ်ကြသည်။ ဘားရက်သည် နောက်ထပ် ယဉ်ကျေးမှု အသိုင်းအဝိုင်း တစ်ခုတွင် သူ့ကိုယ်သူ အံဝင်အောင် ကြိုးပမ်းရပြန်သည်။ သူသည် ပျော်သလိုလို ခံစားရသော်လည်း သတ္တမတန်း အရောက်တွင် “ကလေးဆိုးကလေး” ဖြစ်လာခဲ့ရာ ဆရာ၊ ဆရာမ များက သူ့ကို ဘာလုပ်ရမှန်းမသိလောက် အောင် ဖြစ်လာခဲ့သည်။ အတန်းတူ ကျောင်းသားထဲမှ သူ့ကို အသားရောင် ခွဲခြား ပြောဆိုပါက သူ၏ လက်သီး ဒဏ် ခံကြရသည်။
အထက်တန်းကျောင်းတွင် ဘားရက်သည် ကျောင်းသားတိုင်းနှင့် သင့်မြတ်ခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်း သူရေးသားခဲ့ သည်မှာ “ကျွန်တော်သည် လူဖြူနှင့် လူမည်း ကမ္ဘာနှစ်ခုတွင် ကူးချည်သန်းချည် ရေလိုက်ငါးလိုက် နေခဲ့ရင်း တစ်ခုစီတွင် ကိုယ်ပိုင် အပြောအဆို၊ အကျင့်စရိုက်နှင့် ခံယူသော အဓိပ္ပါယ်များ ရှိသည်ကို နားလည်ခဲ့ပြီး ကမ္ဘာနှစ်ခုသည် ကျွန်တော့်အတွက် တဖြည်းဖြည်း စုစည်းပေါင်းဆုံ လာတော့သည်။” သူသည် လူမည်း သူငယ်ချင်း များကို ရှာဖွေခဲ့သည်။ လူမည်း စာပေများ ဖတ်ရှုခဲ့သည်။ သူ၏ အဖြူအမည်း ကပြား အခြေအနေနှင့် ကိုက်ညီလာစေရန် မျှော်လင့်ခဲ့သည်။ သူသည် အဖြူအမည်း သူငယ်ချင်းများနှင့် ဘတ်စကတ်ဘော ကစားခြင်းဖြင့် စိတ်တွင် ပျော်ရွှင်မြူးတူးခဲ့သည်။
တဖြည်းဖြည်း ဘားရက်သည် သူ၏ အတွင်းစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုနှင့် မကျေနပ်မှုတို့ တုံ့ပြန်သောအားဖြင့် ဆေးလိပ် သောက်ခြင်း၊ အရက်သေစာ သောက်စားခြင်းအပြင် မူးယစ်ဆေးပါ သုံးစွဲလာတတ်တော့သည်။ အထက်တန်း ကျောင်း နောက်ဆုံး ၂ နှစ်တွင် စာမေးပွဲများတွင် အမှတ်များ ထိုးကျလာခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်း သူက ယခုလို ရေးသားခဲ့သည်။ “ကျွန်တော့်ကြောင့် မဟုတ်ဘဲ ခံစားမိသော မိမိကိုယ်မိမိ မကျေနပ်မှုများကို ဖြေဖျောက်ရန် ကျွန်တော်သည် မူးယစ်ဆေးဝါးဘက်သို့ ဦးတည်လာခဲ့မိသည်။” သူ၏ မိခင်သည် အင်ဒိုနီးရှားမှ သူ့ကို မကြာခဏ လာရောက် တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ အထက်တန်းကျောင်း နောက်ဆုံးနှစ်တွင် သူ၏မိခင်သည် သူ့အရင်းနှီး ဆုံး သူငယ်ချင်းထဲမှတစ်ယောက် မူးယစ်ဆေးဝါးမှုဖြင့် အဖမ်းခံရသည်ကို အကြောင်းပြုပြီး သားငယ်ကို အကြီး အကျယ် ဆုံးမစကား ပြောဆိုတော့သည်။
ဘားရက်သည် သူ့အမေကို ခံမပြော။ ကာလီဖိုးနီးယားတွင် ရှိသော ကောလိပ်သို့ သွားရောက် ပညာသင်ကြား ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ သို့သော် ပညာကို ကောင်းစွာမကြိုးစား။ ကျောင်းတွင် လူထုအစည်းအဝေး တစ်ခုကို တက်မိရာက သူ့ကို တောင်အာဖရိက၏ အသားရောင် ခွဲခြားရေး မူဝါဒအကြောင်း ပြောကြားရန် တောင်းဆို သဖြင့် မိန့်ခွန်း ပြောကြား ခဲ့သည်။ ထိုအခါမှစပြီး သူသည် ဘဝသစ်ကို အစပျိုးရန် သန္နိဋ္ဌာန် ချခဲ့သည်။ ဘားရက် သည် အမေရိကန်နိုင်ငံ အနောက်ဘက်မှ အရှေ့ဘက်သို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး နယူးယောက်မြို့ရှိ ကိုလံဘီယာ တက္ကသိုလ် တွင် ကျောင်းနေရန် စာရင်းသွင်းခဲ့သည်။ ဘားရက် အိုဘားမားသည် သူ၏ဘဝတွင် ပထမဆုံး အကြိမ် အဖြစ် ပညာကို ကြိုးကြိုးစားစား သင်ယူခဲ့တော့သည်။
၁၉၈၃ ခုနှစ်တွင် ဘွဲ့ရရှိခဲ့ပြီး စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတစ်ခုတွင် လစာမြင့်မားသော အလုပ်ကို ရရှိခဲ့သော်လည်း သူသည် စိတ်ချမ်းမြေ့မှုနှင့် ကျေနပ်မှု မရှိသည်ကို ခံစားမိသည်။ အိုဘားမားသည် သူ့ဘဝတွင် ကွက်လပ် ဖြစ်နေသည့် ဟာကွက် ကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မည့် အလုပ်အကိုင် မျိုးကို ရှာဖွေရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ သူသည် အလုပ်အကိုင်ပေါင်း မြောက်များစွာ ထဲမှ သူနှင့် အံဝင်မည့် အလုပ်တစ်ခုကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ယင်းအလုပ် မှာ ချီကာဂို မြို့တွင် တစ်နှစ်လျှင် ဒေါ်လာ ၁ဝဝဝဝ ရရှိသည့် လူထုစည်းရုံးရေး အလုပ် Community Organizer ပင် ဖြစ်တော့ သည်။ ဘားရက်သည် သူ့မိခင်နှင့် အဘိုးအဘွားများ၏ ဇာတိနယ်မြေ ဖြစ်သော အမေရိကန်နိုင်ငံ အနောက် အလယ်ပိုင်း သို့ ပြောင်းရွှေ့ နေထိုင်ခဲ့သည်။ ဤဒေသတွင် အိုးအိမ်အသစ် ထူထောင်ပြီး သူ့ ဘဝကို အာရုံစူးစိုက်ခဲ့တော့သည်။
မြို့၏ အဆင်းရဲဆုံးသော ရပ်ကွက်များတွင်သုံးနှစ်ကြာ အလုပ်လုပ်ကိုင်စဉ် အဆင်းရဲဆုံး အတန်းအစား၏ မကျေနပ်မှုများ စိန်ခေါ်မှုများနှင့် ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာ မတရားမှုများကို သိရှိနားလည် လာခဲ့သည်။ သူသည် တက္ကသိုလ်သို့ ပြန်လည် သွားရောက်ပြီး ဥပဒေဘွဲ့ယူကာ ချီကာဂိုမြို့သို့ ရှေ့နေတစ်ဦးအဖြစ် ပြန်လည် လာခဲ့ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ အိုဘားမားသည် ဟားဗတ်တက္ကသိုလ် ဥပဒေကျောင်း Harvard University’s Law School သို့ ပညာသင်ရန် လျှောက်ထားရာ တက္ကသိုလ် ဝင်ခွင့် ရရှိတော့သည်။ ဥပဒေဘွဲ့ ရရှိပြီး ရှေ့နေအဖြစ် ချီကာဂိုသို့ ပြန်လည် ရောက်လာသောအခါ ဒေသခံ အမျိုးသမီး ကလေး မီရှယ် ရော်ဘင်ဆင်နှင့် တွေ့ဆုံ နှစ်ခြိုက် ခဲ့ပြီး လက်ထပ်ခဲ့သည်။ မီရှယ် ရော်ဘင်ဆင် သည်လည်း ဟားဗတ် ဥပဒေဘွဲ့ ရရှိသူတစ်ဦးပင်။
လက်ထပ်အပြီး ဘားရက်အိုဘားမားသည် နိုင်ငံရေးနှင့် စာပေ သင်ကြားရေး နယ်ပယ်သို့ ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ချီကာဂို တက္ကသိုလ် ဥပဒေကျောင်း University of Chicago Law School တွင် ၁၂နှစ်ကြာ ဖွဲ့စည်း အုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေ Constitutional Law ကို သင်ကြားပေးခဲ့သည်။ သူသည် စာပေသင်ကြားခြင်းကို ကြိုက်နှစ်သက် သလို စာသင်ကောင်းသော ဆရာလည်း ဖြစ်ပေသည်။ အိုဘားမားသည် သူ၏ အတွေ့အကြုံနှင့် ပတ်သက်၍ ယခုလို ပြောကြား ခဲ့သည်။ “စာပေ သင်ကြားပေးခြင်းသည် လူကို ဖျတ်လတ်စေသည်။ ဖွဲ့စည်း အုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံ ဥပဒေ သင်ကြားပေးခြင်း၏ ကောင်းသော အချက်တစ်ခုမှာ ခက်ခဲသော မေးခွန်းမှန်သမျှ အမေးခံရ သည်။ ဥပမာ၊ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချမှု၊ လိင်တူ ဆက်ဆံသူများ၏ အခွင့်အရေး အစရှိသော မေးခွန်းများတွင် သင်သည် အပြုသဘောဘက်မှရော ဆန့်ကျင်ဘက်မှရော ပြောဆိုနိုင်ရန် လိုအပ်ပေသည်။”
အိုဘားမားသည် ပြည်နယ် ဆီးနိတ်သို့ ရွေးချယ်ခြင်း ခံရသောအခါ သူစာပေ သင်ကြားပေးသော အတန်းများ ကို တနင်္လာနေ့ နံနက်များနှင့် သောကြာနေ့ ညနေများသို့ မလွှဲမရှောင်သာဘဲ ပြောင်းရွှေ့သင်ကြားပေးရတော့ သည်။ ယင်းကဲ့သို့သော နေ့နှင့်အချိန်များသည် မည်သည့် ဆရာ၊ ဆရာမကမှ ဖြည့်စွက်ယူ ပေးလိုသောနေ့နှင့် အချိန်များ မဟုတ်ပေ။ သို့ရာတွင် ပါမောက္ခ အိုဘားမား၏ အတန်းများသည် ကျောင်းသူ ကျောင်းသားများဖြင့် ပြည့်လျှံနေတတ် သည်။ ကျောင်းသားတစ်ဦးက ယခုကဲ့သို့ သတိတရပြောကြားခဲ့သည်။ “နံနက် မိုးလင်းတာနဲ့ အတန်းဟာ ကျောင်းသား အပြည့် ပါပဲ။” နောက်ထပ် ကျောင်းသား တစ်ဦးကလည်း ဤကဲ့သို့ ပြောပြသည်။ “သူဟာ တကယ် ထူးချွန်တဲ့ဆရာ တစ်ယောက်ပါ။ အလွန်သိမ်မွေ့တဲ့ ခေါင်းစဉ်တွေကို တစ်ဦးတည်း ပိုင်ပိုင် နိုင်နိုင် သင်ကြားပြသ နိုင်တယ်။”
တတိယတစ်ဦးက အိုဘားမား၏ အတန်းများနှင့် ပတ်သက်ပြီး အောက်ပါအတိုင်းသုံးသပ်ခဲ့သည်။
“သူဟာအတန်းထဲက ကျောင်းသားတိုင်းရဲ့ အသံကို ကြားချင်တတ်တယ်။ အကယ်၍ အထင်အမြင် တစ်ခုခု အပေါ်မှာ ဆွေးနွေး ပြောဆိုကြမှု သိပ်မရှိခဲ့ရင် သူကိုယ်တိုင် ဦးဆောင်ပြီး သူဘက်ကိုယ့်ဘက် အမြင်အမျိုးမျိုးနဲ့ အခြေအတင် ဆွေးနွေးပြတတ်တယ်။ သူဟာ အခြေအတင် ပြောခြင်း၊ စကားနပန်းထိုးခြင်းတို့ကို အားပေးတယ် ။ မိမိရဲ့ ယုံကြည်မှုကို လက်တွေ့ အကောင်အထည် ဖော်ရန် လိုအပ်တယ်။ ဒါမှ မိမိ လိုချင်တဲ့ အပြောင်းအလဲ ဆိုတာ ဖြစ်လာမယ်လို့ ပါမောက္ခ အိုဘားမားက ကျွန်တော့်တို့ကို သတိပေးဖူးပါတယ်။”
ကျောင်းသားများ၏ အတော်ဆုံး ဆရာများစာရင်းတွင် ပါမောက္ခ အိုဘားမားသည် အမြဲတမ်း ပါဝင်လေသည်။ တက္ကသိုလ်များ၏ ဓလေ့ တစ်ခုမှာ အကယ်၍ ဆရာသည် ၁၅ မိနစ်ထက် နောက်ကျလျှင် ကျောင်းသူ ကျောင်းသား များ အတန်းမှ ထွက်သွားခွင့် ရှိသည်။ တစ်ခါတွင် ပါမောက္ခ အိုဘားမားသည် ၄၅ မိနစ် နောက် ကျသည်။ သို့သော် တစ်တန်းလုံးရှိ ကျောင်းသား အားလုံး သူ့ကို စိတ်ရှည်လက်ရှည် စောင့်နေခဲ့ကြသည်။ ဤကဲ့သို့ ဆရာအပေါ်တွင် ယုံကြည်မှု ပြသခံရသော ပါမောက္ခများဟာ အနည်းငယ်သာ ရှိပေသည်။
သမ္မတဖြစ်ရန် မဲဆွယ်ဟောပြောပွဲတစ်ခုတွင် အိုဘားမားသည် အောက်ပါအတိုင်း ပြောခဲ့သည်။
“ကလေးတစ်ဦးရဲ့ အောင်မြင်မှုတွင် မိဘ သို့မဟုတ် ဆရာက အဲဒီကလေးကို တစ်ချိန်ချိန်တွင် မင်းအောင် မြင်မယ်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်အောင် ပြောကြားပေးမှုဟာ အလွန် အရေးကြီးပါတယ်။ ကလေးတွေ စာသင်ခန်းထဲ ဝင်လာတဲ့ အခါမှာ သူတို့ရဲ့ ဘဝမှာ အောင်မြင်မှု ကို ဘာက အဆုံးအဖြတ်ပေးသလဲ ဆိုရင် သူတို့ရဲ့ အသားအရောင်၊ သူတို့လာခဲ့ တဲ့ဒေသ၊ သူတို့ရဲ့ မိဘနဲ့ သူတို့ရဲ့ ချမ်းသားဆင်းရဲမှုတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ရဲ့ ဆရာဟာ ဘယ်သူလဲ ဆိုတာက အဓိက အဆုံးအဖြတ်ပဲ။ ဆရာဆိုတာဟာ လခနည်းနေပါစေ၊ အလွန်ခက်ခဲတဲ့ ကျောင်းဖြစ်ပါစေ၊ ကျောင်း သားတွေဟာ ဘယ်လိုဗီဇမျိုးပဲ ဖြစ်ပါစေ တောက်ပတဲ့ ကြယ်ပွင့် ကလေးတွေ ဖြစ်လာအောင် ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်မျိုး မွေး တတ်ကြတယ်”။
Credit to မောင်ပြည်အောင်(ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်)
လိုု့ဂုုဏ်တင်ပြောဆုိုကြပါတယ်။ အမေရိကန် General Motor ကုမ္မဏီထုတ် Cadillac ဇိမ်ခံကား Brand ကနေခွဲထွက်
တဲ့ ခါးရှည် ကားအမျိုးအစား ဖြစ်ပါတယ်။ မဖတ်ရှု ရသေးသူများအတွက် နောက်တစ်ခါ ထပ်မံ တင်ပြ လိုက်ရပါတယ်။ဆီတိုုင်ကီ
Dashboard တွင်ဆက်သွယ်ရေးဌာနချိတ်ဆက်မှုုနှင့်ဂျီပီအက်စ်လမ်းကြောင်း ရှာဖွေရေးစနစ်တိုု့ပါဝင်
စတီးကွင်းအောက်ခြေခံ၊ကျည်နှင့်သံဆူးများမဖောက်နိုင်သော Kevlar ဓာတုုဖြင့်ပြုလုုပ်ထားသော Run-flat တာယာအမျိုးအစား။
အရှည်။ ။ ၁၈ပေ
အမြင့် ။ ။ ၅ ပေ၁ဝလက်မ
အလေးချိန်။ ။ ၈ တန်
အင်ဂျင်။ ။ ၆.၅လီတာ၊ဒီဇယ်
အမြင့်ဆုုံးပြေးနှုုန်း။ ။ တစ်နာရီမိုုင်၆၀
ဆီစားနှုုန်း။ ။ 8mpg
ထိုုင်ခုုံ ။ ။ ရဦးစာ
Credit to http://www.yeyintnge.com/2012/11/cadillac.html
Ref; officeusaColayOnline:Cherrymyay Automobilerental
ရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့ အိုဘားမားရဲ့စီးတော်ယာဉ် The Beast
by adminon November 18, 2012in News
အမေရိကန်နိုင်ငံ ရဲ့ ၄၄ ယောက်မြောက် သမ္မတ အိုဘားမား စီးတဲ့ကားကို ‘The Beast’ လို့အမည်ပေးထားပါတယ်..။ ကျနော့်အမြင်ကတော့ ကားလို့မခေါ်ပဲ ‘တင့်ကား’ လို့ခေါ်ရင်ပိုပြီး ကောင်းမလားပဲ.. ဘာရယ်တော့မဟုတ်ပါဘူး.. စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေအတွက် ဗဟုသုတ အနေ နဲ့ ‘The Beast’ အကြောင်း နည်းနည်းပြောကြည့်ရအောင်လားနော်…။
‘The Beast’ ရဲ့ အရှည်ဟာ 18 ft ရှိပါတယ်..။ အမြင့်ကတော့ 5ft 10 inch ရှိပြီး အင်ဂျင်ကတော့ 6.5 litre diesel engine ဖြစ်ပါတယ်..။ အမြန်ဆုံးမောင်းနှင်နိုင်တဲ့ မြန်နှုန်းကတော့ 60MPH and 0-6mph – 15secs ဖြစ်ပြီး ဆီစားနှုန်းအနေနဲ့ ၈ မိုင် ကို တစ်ဂါလံဖြစ်ပါသတဲ့..။ ထုတ်လုပ်ပေးတဲ့ ကုပ္မဏီကတော့ GM ဖြစ်ပါတယ်..။ သမ္မတ အပါအဝင် ရ ယောက်စီးနင်းလိုက်ပါ နိုင်ပါတယ်..။ ကားရဲ့တန်ဖိုးကိုတော့ £ 300,000 လို့ရေးထားပါတယ်..။ ကားကိုမောင်းနှင်တဲ့ ယာဉ်မောင်းကို အမေရိကန် စီအိုင်အေ ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့က အထူး လေ့ကျင့်ပေးထားပါတယ်..။ ၅ လက်မ အထူရှိတဲ့ တိုက်တေနီယမ် ဘော်ဒီ နဲ့ ကျည်ကာမှန်တွေဟာ သေနတ် ပစ်ခတ်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိတဲ့ အပြင် စီးနင်းလိုက်ပါလာသူတွေကို ရိုင်ဖယ်သေနတ်၊ ပစ္စတိုသေနတ် စတဲ့ စစ်သုံးအသေးစား လက်နက်မျိုးစုံ ပစ်ခတ်မှုကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်..။ ဒါ့အပြင် ကားထဲက စီးနင်းသူများကို
လက်ပစ်ဗုံးဆန်များ လောင်ချာများ ထိမှန်ခြင်းကနေလည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်..။ ကားတာယာများဟာလည်း ပေါက်နေသည့်တိုင် မောင်းလို့ရတဲ့ တာယာတွေဖြစ်တဲ့အတွက် တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ နေရာကနေ ကားကို အမြန်မောင်းထွက်နိုင်ပါသတဲ့…။ ကားတွင်းမှာ တပ်ဆင်ထားတဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် ဆက်သွယ်ရေးအချက်အလက်တွေ ကွန်ပြူတာပိုင်းဆိုင်ရာ တွေအနေနဲ့တော့ အထူးပြောစရာမလိုလောက်အောင် ကို ပြည့်စုံပြီးဖြစ်မယ်ဆိုတာ အားလုံးသိပြီးဖြစ်မှာမို့ မပြောတော့ပါဘူး..။ အထူးကိရိယာ တွေထဲမှာ အရေးပေါ် လေသန့်ထုတ်ပေးတဲ့စနစ် ပါဝင်ပါတယ်..။ ဓာတုလက်နက် နဲ့ တိုက်ခိုက်ခြင်းခံရပါက ကားတွင်းမှာ အရေးပေါ် လေသန့်ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ စနစ်ပါဝင် ပါတယ်..။ အပြင်ကနေ မျက်ရည်ယိုဗုံး အဆိပ်ဓာတ်ငွေ့ စတာတွေကို ကားတွင်းမှာတပ်ဆင်ထားတဲ့ ဆင်ဆာက အာရုံခံမိတာနဲ့ ကားထဲရှိ လေအေးပေး စနစ်ဟာ ပြင်ပက လေဝင်ရောက်မှုကို အလိုအလျောက် ပိတ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်..။ အရေးပေါ်အခြေအနေမှာ ကားတွင်းက ပုဂ္ဂိုလ်များ ကားနောက်ဘက် (အံဖုံးနောက်တံခါး)က ထွက်လိုပါက ကားတွင်းရှိ ခလုတ်တစ်ခုကို ဆွဲလိုက်တာနဲ့ ထွက်နိုင်အောင်လည်း စီမံထားပါတယ်..။ ကားရဲ့ ဆီတိုင်ကီဟာလည်း တစ်စုံတစ်ရာကြောင့် ပေါက်သွားပါက အလိုအလျောက် ပြန်ပိတ်နိုင်တဲ့အထိ စီမံထားပါတယ်..။ ကားနောက်မှာတပ်ထားတဲ့ ကင်မရာက ကားနောက်ပိုင်း အခြေအနေကို မျက်ခြည်မပြတ် စောင့်ကြည့်နေပါတယ်..။ ညပိုင်းမောင်းနှင်တဲ့ အခါ ထိခိုက်မှုနည်းပါးစေဖို့ ရှေ့မြင်ကွင်းကို ‘အင်ဖရာရက်′ ရောင်ခြည်သုံး မီးလုံးများနဲ့ ထိုးထားပါတယ်..။ ကားလေကာမှန်ဘေးမှာ တပ်ဆင်ထားတဲ့ ‘အင်ဖရာရက် ကင်မရာ’ က လမ်းပေါ်မှ ထင်လာတဲ့ ပုံရိပ်များကို ကားတွင်းရှိ ထိန်းချုပ်ဖန်သားပြင်ကို ပို့ပေးပါတယ်..။ ကားရဲ့ ဘရိတ်စနစ်ဟာ ရေဒါသုုံး ဘရိတ်စနစ် နဲ့ ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်..။ ရှေ့ကား နဲ့ နီးလာပြီဆိုရင် အလိုအလျောက် သတိပေးတယ်.. ကားချင်းတိုက်တော့မယ့် အခြေအနေရောက်ပြီဆိုရင် ဘရိတ်ကို ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာ ထိ အုပ်ရမယ်ဆိုတာကို အလိုအလျောက်တွက်ချက် ထိန်းပေးနိုင်တဲ့အတွက် ကားမောင်းသူက လိုသလောက် ဘရိတ် မအုပ်မိ ခဲ့ရင်လည်း ဒီရေဒါသုုံး ဘရိတ်စနစ်က လိုသလောက် အလိုလို ဘရိတ်အုပ်ပေးနိုင်တယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်…။
ဒီလို တစ်စုတစ်စည်းတည်းကြည့်ရတာ ကျေးဇူးပါ ကိုသစ်မင်း။ နောက်ဆုံး စာက အတော်ရီရတယ်။
ကျနော်လည်း မနေ့ကတည်းက သီတင်းက တက်သမျှ ပုံတွေကြည့်ပြီး ကြည်နူးနေတာ။
(အဟမ်း၊ စကားမစပ် မြန်မာတိုက်ပုံနဲ့ အချိုးကျကျ မြန်မာ အမျိုးသားတွေ မတွေ့ရသလောက် ရှားသဗျာ။ ဗိုက်ပူတွေပဲ မြင်မိသလားပဲ။
ဒီ ဓာတ်ပုံတွေထဲ ပြောတာနော်။)
မဆွိကလည်း ဗိုုက်ပူဆို သူတို့ က အထိုင်များ အစားများတွေ ဥစ္စာ သူများတွေလို သက်လုံမကောင်းကြရှာဖူးလေ
တစုတစည်းထဲ မြင်ရလို့ ကျေးဇူးပါ ။ အမေ့အိမ်က ခန့်ညားလိုက်တာ။
ဟီလာရီ လာတုန်းက တင်ခဲ့ဘူးတဲ့…
တကယ့်ကို မေတ္တာယူ၍ မေတ္တာပေးနေကြတာပါ ဆိုတဲ့ ပို့စ်လေးကို
အခု အမေရိကန် သမ္မတ ကြီးရဲ့
တယုတယ ဆက်ဆံပုံတွေကို ကြည့်ပြီး
ကာယကံရှင် အမေစုကတော့ ဘယ်လိုခံစားရမယ်မသိ..။
သာမာန်ပြည်သူ တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော်တောင်
ဒါ…အမေစုအတွက် ကြီးမားတဲ့ဆုလာဘ်ကြီးတစ်ခုလို့ ဆိုချင်ပါတယ်ဗျာ…။
အိုဘားမားက ဘာလို ့ကျောက်ဆင်းတုကြီးကို ရေလောင်းနေတာလဲဗျ
ကံအညံ့တွေ ပြေပြီး ကံကောင်းအောင်လို့လေ ဗိုက်ဗိုက်ရဲ့ ဒါလေးတောင် မသိဘူးလား ဟီး
ဗိုက်ဆိုတာပူပြီးရင် လွယ်လွယ်နဲ့ ပြန်ကျတာကလေးမွေးတာဘဲရှိတယ်။
အမေက အဲဒီအိမ်ကြီးနဲ့လိုက်တယ်နော်။ လာလိုက်တဲ့ နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေ။
ကျနော်တို့မြန်မာပြည်ကြီး လူရာသွင်းခံရတာ အမေစုရဲ့ အင်အားမသေးလှဘူးဆိုတာ
ပြ နေတဲ့ ပန်းချီကားတွေလို့တွေးမိတယ်ဗျာ။
အဲဒီလိုလုပ်ရမယ်လို့ အမေစု ကပြောတယ်ထင်ပါရဲ့ ကွာ။
““ဦးလေးကြီးတို့ အော်ပါလား”” ဆိုပါလား..
တိုးတိုးလေးပေမယ့်..ပြန်ပြောရဲတဲ့ ကလေးမသတ္တိကို ချီးကျူးတယ်ဗျို့
နိုဝင်ဘာ ၁၉ ရက်နေ့ကို အိုဘာမားနေ့လို့တောင်ပြောရမလိုဖြစ်နေပြီနော် …….
ဒါ့ပုံတွေ အားဂျီးဘဲ ..
ကျေးဇူးဘာ ဆြာသစ် ခညာ …
အိုက် ဒါ့ပုံတွေထဲက “အမေ့အိမ်” ဆိုတဲ့ စကားလုံးလေးနဲ့ ပုံကလေးရယ် …
“အိမ်တလုံးနှင့် လူတယောက်ဆီ သမိုင်းဝင် ပထမဆုံး သွားရောက်ဂါရဝပြုတဲ့ အမေရိကန်သမ္မတ” ဆိုဒါရယ် ..
အောက်ဆုံးက “““ဦးလေးကြီးတို့ အော်ပါလား”” တဲ့ ဆိုတာလေးရယ် အရမ်းကျိုက်ဒယ်ဂျာ …
jullies cezer ရေ
ကျနော် ဒီပို့စ်ကို စာရေးဖို့စဉ်းစားသေးတယ်။
နောက်တော့ ဒီအတိုင်းတင်တာဘဲ ကောင်းပါတယ်ဆိုပြီး နာမည်လေးတွေပေးလိုက်တာပါ။
ရဲကားထဲမှာ အိပ်ပျော်နေတဲ့ ရဲသားကြီးရယ်
လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ကြီး နှစ်ယောက်နဲ့ပုံရယ်
ဂုဏ်ပြုတပ်ဖွဲ့ကို အမေရိကန်လုံခြုံရေးက စစ်ဆေးနေတဲ့ပုံရယ်
လာရောက်ကြိုဆိုတဲ့ ကလေးမလေးကို ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ရဲမမလေးက ရင်ဘတ်မှာ တစ်ခုခုတပ်ဖို့ ကူညီပေးနေပုံရယ်
အကုန်လုံး မလွယ်ပါ သနော်…………….
ပုံ သုံးဆယ် ကျော် …………………ကျနော် တင်ခဲ့ပါရဲ့
ဘဝင်ကျစရာ အစုံမပါဘူး ဆိုရင်ဖြင့်…………..
တင်ပြစရာ ကုန်စင်အောင် မကြိုးပမ်း နိုင်သူလို့….
ငိုင်ငူကာ ကျနော်မှာဆွေးရမယ် …………တွေးရခက်ခဲ
ဪ တွေး ရခက်ခဲ ….. ။
လောလောဆယ် ကျနော် လက်လှမ်းမှီသလောက်တင်ခဲ့ရတာပါ။
အကယ်၍ ကိုမိုးသောက်ရဲ့ ရီကွက်စ် လေးတွေရှာလို့ရမယ်ဆိုရင် တင်ပေးပါ့မယ်လို့။
ဖွားစု အိမ်ထဲက ပုံတွေ ကျွန်တော်အကုန်မမြင်ဖူးဘူး
ဒီမှာ အကုန်မြင်ရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအရမ်းတင်တယ်နော်
မြင်ရသမျှ တွေ့ရသမျှ ကြားရသမျှ အကုန်လုံး
မ နှင်းဆီ ငုံ ရေ
((ကောင်းလေစွ ကောင်းလေစွ ကောင်းလေစွလို့ ပြောတာနော်။))
၆ နာရီ ဆိုတဲ့အချိန်လေးမှာ လူသားတော်တော်များများရဲ့ အသဲနှလုံးများကို ညှို့ယူသွားနိုင်သော
အင်မတန် လှပတဲ့ အနာဂတ်ဆိုတဲ့ အရောင်လေးနဲ့ ချယ်မှုန်းထားလေတော့ ကြည်နူးဘွယ်ရာဖြစ်တာ
ပျောက်နေတယ်လို့ထင်တယ်။ အို ဘားမားနဲ့ ပါသွားတာလားလို့။(^^)
စုစည်းထားတာ ကျနော် ကိုယ်တိုင်ကကိုလိုချင်လို့ စုထားမိတာ။
ကိုသစ်ရေ.. ဓါတ်ပုံတွေတစ်စုတစ်စည်းဖော်ပြပေးလို့ ကျေဇူးပါ။
၂၀၁၂မှာ မြန်မာပြည်ကို အိုဘားမား ဒေါ်စုမျက်နှာနဲ့ (လာရတဲ့အကြောင်းအရင်းမှာဒါက တစ်လို့ကိုရင်မြင်တယ်)
လာလည်တာသိရတော့ ကိုရင် ၂၀၁၁ နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်က ရွာထဲမှာ၂၀၁၂ အတွက်ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့တာလေး
ပြန်အမှတ်ရမိသွားပါတယ်။ ၂၀၁၃ အတွက် မိမိ နိုင်ငံကိုလည်း ဒီထက်ကောင်းမယ့် ဟောကိန်းလေးထုတ်ချင်တယ်။
ဒေါ်စု မျက်ရည်ဝဲတာရယ် အားလုံး ထောက်ဆပြီး တွက်ချလိုက်ရင်တော့။
အိုဘယ့်.. မြန်မာ.. ဗမာ…
မင်္ဂလာရှိသောနေ ့တနေ ့ပါဘဲ။
အမေစုရဲ ့အမှတ်တရကောင်းချီးမင်္ဂလာနေ ့တနေ ့ပါဘဲ။
ကိုသစ်ရေ…အမေ့အိမ်ကို Burma White House လို့ ပြောင်းလဲခေါ်ဆိုဖို့တောင်ကောင်းနေပါပြီ…
ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်တွေ ထဲကထင်ရှားတဲ့ခေါင်းဆောင်တိုင်း ခြံအမှတ်(၅၄)ကိုအရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်…။
လေးဖြူရဲ့ Power (54) ဆိုတာလေးကို အမှတ်ရသတိရမိပါတယ်…။
ဓါတ်ပုံများကို တစ်နေရာထဲမှာ တစ်စုတစ်ဝေးထဲကြည့်ဝင့်ရတဲ့အတွက် ရှယ်ကျေးကျေးပါ ကိုသစ်ရေ…
အားပေးတာ ကျေးဇူးပါ။ နောက်တိုးပုံတွေ တင်ထားပါသေးတယ်။
အမှန်ပါဘဲ။ သိပ်ကောင်းတဲ့ စိတ်ကူးလေးပါ။
နောက်တိုးပုံများနှင့် ဖြည့်စွက်ချက်များ ထပ်မံ အားဖြည့်ထားပါတယ်။
နောက်တစ်ခေါက် ဝင်ကြည့်ပြီးပါပြီ ခင်ဗျာ…။
နိုဝင်ဘာ လ စတုတ္ထ ပတ် ထဲက ရက်တွေကို
ကျွန်တော်က ခေါင်းစဉ်တတ်ချင်ပါတယ် ကိုသစ်ရေ…။
တကယ့်ကို ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူထုကြားထဲမှာရော…
အိုဘားမား သတင်းတွေ နဲ့ ပြည့်နှက်နေလို့ပါဗျာ…။
မှတ်တမ်းလေးတစ်ခုလို စုစည်းပေးထားတာကျေးဇူးပါ ကိုသစ်ရေ…။
Contact us ဆိုတဲ့ စကားလေးက မဂ္ဂဇင်းစာအုပ်နောက်ကျောဖုံးရဲ့ Company
အဲဒါကို “ယူအက်(စ)” ကို ဆက်သွယ်ပါလို့ အဓိပ္ပါယ် ပေါက်တယ်ဆိုပြီး
ဪ အတိတ်၊ အတိတ်။